Ukuqonda komuntu kuyasifundisa ukuthi isiko lase-Afrika laseCongo liguqukela izinhlelo ezahlukene ze-3 ngesikhathi esifanayo:
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 3, 2018 00: 20 Awekho amazwana
1. Endizeni yemvelo, impahla noma yezwe;
2. Emotionally (umzwelo, ukuzwa) noma i-Astral;
3. Endizeni yokucabanga (Psychic) noma engqondweni.
Indiza engokwenyama iyona yokugcina embusweni wokuziphendukela kwemvelo womuntu. Lokhu kusho ukuthi ukulinganiselwa kwezindiza eziphakeme. Ukwenza umdwebo omncane, ngizosho lokhu: ukuvela komuntu kufanele kuqale endizeni yengqondo (Psychic) okusho ukuthi indiza yokucabanga, inokulawula imicabango yakhe, futhi uyihlele, uyibuyise futhi uyihlele.
Lolu hlelo oluhle kakhulu lwengqondo luzoshintsha umzwelo, izinzwa noma indiza yezinkanyezi ezihlobene necebo Karmic dukuheha futhi le ndiza izovele ivele indiza ebonakalayo esiyibona phambi kwamehlo ethu.
Abanye abantu abaqondi ukuthi kungani izimpilo zabo zingaguquki, yingoba bacabanga ukuthi konke okwenzeka kubo kuvela endizeni futhi bangazi ukuthi bukhona yini endizeni yokucabanga kanye nemizwa okuvela kuyo yonke indalo yendawo yethu evela kuyo.
I-Oct21 10: 01